Mikorontandrontana i Gambia, Fa Dia Tsy Misy Fantatrao Na Kely Aza · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Liam Anderson
Voadika ny 07 Mey 2016 17:38 GMT
Mpandray anjara manofahofa ny tanan'izy ireo nandritry ny fihetsiketsehana iray nanoherana ny filoha Yahyah Jammeh tao Gambia. Sary: Youtube
Tamin'ny volana lasa i Gambia, firenena iray bitika ao Afrika Atsinanana, dia niaina korontana iray tsy mbola nisy toa azy. Saiky tsy dia hita loatra tany anatin'ireo fampahalalana vaovao iraisampirenena ireny fihetsiketsehana ireny, amin'ny ampahany dia noho ny famoretana ataon'i Yahya Jammeh, filoham-panjakana tsy hita izay handraisana azy.
Ny Aprily 2016, hetsika am-pilaminana nitakiana ny fanavaozana ny fifidianana, notarihan'i Ebrima Solo Sandeng, mpitarika ireo tanora avy amin'ny antoko mpanohitra lehibe indrindra, United Democratic Party (UDP), no nanombohan’ ilay hetsika. Tany amin'ny farany, nohodidinin'ny mpitandro filaminana ilay fihetsiketsehana, izay nitànana an'i Sandeng taminà toerana fanarahamaso, niaraka tamin'ireo ampolony hafa mahery mpomba ny UDP izay nanjohy ilay famoriambahoaka.
48 ora taorian'ireny fisamborana ireny, fantatra fa maty tany am-pitazonana azy i Sandeng sy roa hafa mpikambana ao amin'ny UDP. Izay vao mainka niteraka ireo fihetsiketsehana vaovao, izay tamin'ity indray mitoraka ity dia i Ousainou Darboe filohan'ny UDP no nitarika azy, nitaky ny hamotsorana ireo mpanao fihetsiketsehana sisa mbola voatàna, na velona na maty.
Zara raha nahavita 300 metatra ny diabe, nosamborin'ny polisy i Darboe sy mpomba azy roapolo raha kely indrindra. Nafahana ny sasany, saingy mbola voatazona kosa i Ousainou Darboe sy ireo 19 hafa, voampanga ary miandry fakàna am-bavany. Imbetsaka izy ireo nanomboka teo no niseho teo anatrehan'ny fitsaràna, ary narovana mafy hatrany, raha ireo fianakaviany sy naman'izy ireo avy ao amin'ny antoko kosa tonga marobe nanotrona teo anoloan'ny tribonaly nihiaka ireo hafatra firaisankina sy nitaky ny hamotsorana azy ireo.
Nivoaka tao amin'ny tambajotra sosialy gambiana ireo lahatsary sy saripika marobe mampiseho olona an-jatony manohitra ny antsoin'izy ireo hoe « fitondràna mpamono olona » ao amin'ny firenena.
Firaisana hina amin'ireo voatàna
Vahoaka marobe no hita nitanjozotra ho any amin'ny tranon'i Ousainou Darboe, sady nihiaka ny « takianay ny hahita an'i Solo Sandeng, na maty na velona ».
Mpanao hetsipanoherana ao #Gambia mitaky amin'ny governemanta hilaza na ‘velona na maty’ i Solo Sandeng taorian'ny tsy nahitàna azy rehefa nosamborina izy
Ireo mpanao hetsipanoherana tao Banjul renivohitra Gambiàna. Sary: pejy Facebook-n'ny antoko UDP.
Faritan’ ireo mpampiasa tambajotra sosialy ho toy ny fihetsika goavana fihantsiana ny filoha Yahyeh Jammeh ireo fihetsiketsehana ireo.
Mifanehatra amin'ireo resaka fanovàna ilaina ny PIU [hery manokan'ny polisy] sy ny polisy. Tsara fa tohizo ry tanora. Fitsaràna Tampony ao #Banjul. Kianjan'ny fihantsiana.
Ny toeran'ny fivavahana
Miozolmana ny 90 % amin'ny vahoaka Gambiàna. Tamin'ny Desambra 2015, Jammeh, miozolmana iray nisora-tena ho mpanasitrana ara-pivavahana, dia nanambara fa repoblika islamika ny fireneny, saingy maro no nanohitra io filazàna io.
Any Gambia, matetika no ampiasain'ireo olo-malaza ara-politka ny fivavahana mba hahazoana laza, ary mividy vola kosa ny sitraka amin'ireo izay manitsaka ny lalantsaran'ny mpitondra kosa ireo mpitarika ara-pivavahana. Ao anatinà firenena iray izay miozolmàna ny ankamaroan'ny vahoaka, tsy dia mahagaga raha maneho hevitra ara-pivavahana ao anatin'ny hetsika fitakiany ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tonga tany amin'ny tribonaly ny andiam-behivavy, nanandratra korintsana no sady nihiaka ireo teny fanevan'ny fahalalahana nalaina tao amin'ny andalan'ny hirampirenena. (Ao anatin'ny kolontsaina Afrikàna, raisina ho karazana fihetsika manozona ny fanandratana korintsana, ary fanehoana fahavononana mandritry ireo fotoana sarotra).
Tsy misy hafa amin'izany, vondrona iray hafa tamin'ireo mpanao hetsipanoherana, notarihan'ireo ‘Imams’ maro tao an-toerana, no tonga tao amin'ny Fitsaràna Tampony nihiaka fideràna an'Andriamanitra.
Mandritra izany fotoana izany, imbetsaka ireo tribonaly no nilaza fa antony ara-teknika no nandàvana ny fanomezana fahafahana vonjimaika ho an'ireo voatàna. Nitohy ny Alakamisy 5 May 2016 teo ny fitsaràna niresahana ny momba ny fahafahana vonjimaika. Marobe ireo mpikambana sy mpomba ny UDP no nandrasana tamin'izany. Saingy nolazain'ireo mpandalina fa ikendrena ny hampivalaketraka ireo mpanao fihetsiketsehana no anton'ireo fihetsika fampitarazohana ny fitsaràna, ary hamonoana tsikelikely ny hafanampo hitaky fanovàna natosiky ny mpanohitra.
Tsy nanatrika fitsaràna
Mampanahy ny maro ny amin'ny fiahiana ireo valo mpikatroka voasambotra nandritra ireo fihetsiketsehana, izay tsy ahitana nanatrika ny fotoana fitsaràna, na taiza na taiza. Anisan'ireo valo ireo i Solo Sandeng sy ireo roa hafa maty tany am-pitazonana azy ireo. Zavatra mpitranga matetika ao Gambia ny fanjavonana tsy nahitàna soritra.
Notakian'ny Amnesty International sy fikambanana marobe hafa mpiaro zon'olombelona ny famotsorana ireo rehetra voatàna.